Dibad baxyo iska soo horjeeda oo Gilgilay Wadanka Jarmalka - iftineducation.com
Dibad baxyo iska soo horjeeda oo Gilgilay Wadanka Jarmalka
iftineducation.com – Waxaa sii xoogeysanaya banaanbaxyada ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Germany kuwaasi oo qaarkooda looga soo horjeedo dadka Soogalootiga ah iyo waliba diinta Islaamka ee dalkaasi kusii fideysa.
Magaalada Cologne ayaa waxaa la joojiyay dibad bax looga soo horjeedo Muslimiinta, kaddib markii uu maamulka magaaladaasi si xooggan u diiday.
Balse magaalada ku taalla bariga Jarmalka ee Dresden ayaa waxaa isugu soo baxay 18 kun oo qof kuwaasi oo sameeyay dibad bax ka dhan ah Islaamka. Dibad baxan ayaa ahaa kii ugu ballaarnaa ee Islaamka looga horjeedo oo Jarmalka ka dhaca.
Banaanbaxyadan ayaa markii hore ka bilaabmay magaalada Dresden, waxaana soo qaban qaabiyey urur cunsuri ah oo la baxay [Pegida], kaasi oo shacabka Germany ugu baaqayey inay ka qeyb qaataan mudaharaadyada looga soo horjeedo Islaamka iyo waliba dadka soogalootiga ah ee kusoo badanaya dalka Germany, sida ay sheegeen.
Balse waxaa hada bilowday banaanbaxyo kale oo iyaguna looga soo horjeedo kooxdan lagu tilmaamay cunsuriyiinta iyo waliba mudaharaadyadooda. Banaanbaxyadan danbe oo iyaguna lagu taageerayo isdhexgalka dad reer Germany iyo in magan-galyo lasiiyo dadka muslimiinta ah, qaxootiga ah iyo soogalootiga.
Banaanbaxa taageerada muslimiinta ayaa la sheegay inay ka dad badnaa kii ay soo qaban qaabiyeen kooxda Pagida, waxayna shacabka kasoo horjeeda kooxdaasi cunsuriyiinta ah iyagana la baxeen [Kogida]
Madaxa dowlada Germany Angela Mercel ayaa ku tilmaamtay kooxda Pagida mid ka shaqeenaysa isku dir iyo buun buunin cabsi gelinta dadka Germany, iyadoo cambaareysay banaanbaxyada looga soo horjeedo Islaamka ee kooxda Pagida wado
Weligaa ceebtaan oo kale mala kulantay Daawo muuqaalka Wiil Fashilmay
Mareykanka oo Maxkamad lagu soo taagayo Rag lagu eedeeyay Afgambi ka dhacay Wadanka Gambia